कुन राशिका केटी प्रेममा छिटो फस्छन त ? जानी राखौ - www.kchhakhabar.com
कुन राशिका केटी प्रेममा छिटो फस्छन त ? जानी राखौ
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष २५, २०७३ समय: ४:४६:०६
मीन राशिका केटीहरु एकदम रोमान्टिक हुन्छन् र छिट्टै मायापे्रममा पर्छन् । यस राशिका केटीहरुलाई ईम्पे्रस गर्न त्यति गाह्रो पर्दैन । मीन राशिका केटीहरुलाई सपनाजस्तो मायापे्रम मनपर्छ र केटाको लागी यस्तो मायाप्रेम कुनै ठुलो कुरै भएन होईन त । साझा सवाल डटकम बाट साभार गरियको ।